တွေ့မိမှတ်မိသမျှ: August 2006
Posted by Philip Shield at 6:36 PM 1 comment:
(http://www.dynamicdrive.com/ )သိသူဖော်စား မသိသူကျော်သွား ပေါ့ဗျာ။
AJAX တို့ RSS တို့နဲ့ ပါတ်သက် တာရှာချင်ရင် တော့ (http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex17/indexb.html)
Posted by Philip Shield at 5:55 PM No comments:
ဒီ Open Source Project ကလေးတွေက မဆိုးဘူး။ တကယ်အသုံးတည့်တယ်။ Configure လဲ လုပ်စရာမလိုဘူး။ Code ကလဲ သိပ်ရှင်းတယ်။
Download here : http://www.myasp-net.com/index.aspx
Today in History V.1.3 is an ASP.NET application that
displayahistory "News Events and Famous Birthdays" based on the current month
and day. Also this application is very easy to modify and integrate into your
existing ASP.Net based site.
XD Link Directory v2.3 is the perfect solution for
startingalink directory website offering full-featured directory of
resources/links similar to Yahoo-style search engine. XD Link Directory allows
you to manage links,comments,categories and sub-categories in an advanced admin
World Recipe V2.7 is an ASP .NET application and an Access
Database to contain and display recipes inawide variety of categories, also
allow your visitors to post their favorite recipes, rate recipe and add comment.
You can edit/delete recipes or comments inapassword protected admin recipe
Posted by Philip Shield at 12:50 AM No comments:
TVU networks isanew global live TV service that enables TV Broadcasters and private individuals to broadcast TV channels toaglobal audiences over the Internet. TVU usesanew application-level multicasting technology (similar to peer-to-peer file sharing) that allows broadcast costs to be exponentially lower than those of today’s streaming technology. TVU offersaconsumer service which aggregates these high-quality TV channels intoaformat similar toacable service for the PC. This new service will premiere later this year. Consumers will be able to watch free live channels from around the globe as well as subscribe to pay channels and pay-per-view events. TVU networks is founded and led byateam of leading industry veterans coming from backgrounds in digital TV, Internet, software and TV programming.
Latest Version: 2.2.0 Released Date: Aug. 2006
TVU Player Channel List: ESPN, CCTV-5, Cartoon Network, ABC, HBO, CNN 1-4, Disney Channel, Hollywood Movie channel and many lesser known ones. If you are looking forafree ride tvu player is exactly what you are looking for.
Broadband Internet connection, such as DSL or cable modem
တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ buffering speed လည်း အခြား WebTV တွေ ထက်မြန်တယ်။ HBO တို့ဘာတို့ မှာဆို ဇာတ်လမ်းကောင်းများ အမြဲလာနေတာ ဆိုတော့ အကြိုက်ပေါ့ဗျာ။ http://www.viidoo.com/en/index.html
Posted by Philip Shield at 6:45 PM No comments:
ဂရိ နတ်မင်းကြီးဇူးစ်ဟာ လောကကြီးကို ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ ကြယ်တွေကို ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ နေတွေ လတွေကို ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ကမ္ဘာမြေကြီးကို ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ တောတောင်တွေကို ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာတွေကို ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေကို ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ နောက်တော့ ယောကျာင်္းမိန်းမတွေကို ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အလှအပနဲ့ အမှန်တရားကို ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ “အလှအပနဲ့ အမှန်တရား” ကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက် နတ်သဘင် အစည်းအဝေးခေါ်လိုက်တယ်။ အစည်းအဝေးမှာ ဇူးစ်နတ်မင်းကြီးက ပြောတယ်။ “အလှအပနဲ့ အမှန်တရား” ကို ငါဖန်ဆင်းလိုက်ပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီ “အလှအပနဲ့ အမှန်တရား”ကို လူတွေ လွယ်လွယ်နဲ့ ရှာမတွေအောင် လုံခြုံတဲ့နေရာမှာ ဖွက်ထားရမယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဖွက်ရရင် ကောင်းမှာလဲ ဆိုတာကို နတ်မင်းများ ပြောကြပါ” လို့ပြောတယ်။ နတ်မင်းတစ်ပါးက “ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာ အောက်မှာ ဖွက်ရရင် တော်တော်နဲ့ ရှာလို့တွေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး နတ်မင်းကြီး” လို့လျှောက်တယ်။ တခြားနတ်တွေက “လူတွေဟာ အင်မတန် စူးစမ်းတတ်တဲ့ သတ္တ၀ါ ဖြစ်တယ်။ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာအောက်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ ရောက်အောင် သွားကြည့်နိုင်မှာပဲ၊ ဒီလိုဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့ပဲ တွေ့သွားနိုင်တယ်” လို့ပြောတယ်။ နောက်နတ်မင်း တစ်ပါးက “အမြင့်ဆုံး တောင်ထိပ်မှာ တင်ထားရရင် ကောင်းမယ်” လို့ပြောတယ်။ တခြားနတ်တွေက “လူတွေဟာ အင်မတန် စူးစမ်းတတ်တဲ့ သတ္တ၀ါဖြစ်တယ်။ တောင်ထိပ် ကိုလည်း လွယ်လွယ်နဲ့ပဲ ရောက်အောင် သွားကြည့်နိုင်မှာပဲ။ အဲဒီလိုဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့ပဲ တွေ့သွားနိုင်တယ်” လို့ပြောတယ်။ ပညာရှိ နတ်သားတစ်ပါးက လက်ထောင်ပြီတော့ “ရှာရ အခက်ဆုံးနေရာကို ကျွန်တော် သိပါတယ်”လို့ ပြောတယ်။ ဇူးစ်နတ်မင်းကြီးက “ပြောပါ” လို့ဆိုတော့မှ ပညာရှိနတ်သားက “အလှအပနဲ့ အမှန်တရား ကိုလူတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာဖွက်ထားလိုက်ပါ။ လူတွေဟာ အပြင်မှာပဲ ရှာလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် နှလုံးသားထဲမှာ ဖွက်ထားတဲ့ အလှအပနဲ့ အမှန်တရားကို တော်တော်တန်တန်လူ တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ အင်မတန် ဉာဏ်ကြီးတဲ့သူ အင်မတန်လုံ့လ၀ီရိယကြီးတဲ့သူမှသာ တွေ့နိုင်မယ်” လို့ ပြောတော့ နတ်မင်းကြီးနဲ့ တခြားနတ်တွေ အကုန်လုံးက သဘောကျတယ်။ လက်ခံကြတယ်။ ဒါမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ လိုချင်တဲ့သူတွေဟာ အပြင်မှာရှာကြမယ်။ စာအုပ်ထဲမှာရှာကြမယ်။ အစစ်ကိုတွေ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အရိပ်ကိုပဲ တွေ့မယ်။ အဲဒါနဲ့ နတ်မင်းကြီးဟာ အလှအပနဲ့ အမှန်တရားကို လူတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ဖွက်ထားလိုက်တယ်။
src: ဆရာတော် ဦးဇောတိက ရဲ့ “အလှတရားမှ အမှန်တရားသို့” မှ။
Posted by Philip Shield at 6:17 PM2comments:
“Most people are poor because when it comes to investing, the world is filled with Chicken Littles running around yelling, ‘The sky is falling. The sky is falling.’”
“Many of today's youth have credit cards before they leave high school, yet they have never hadacourse in money or how to invest it, let alone understand how compound interest works on credit cards.”
Author's Description of his fathers
The Poor Dad in the story is based on Kiyosaki's real father,aPhD holder and graduate of Stanford, Chicago, and Northwestern Universities, all on full scholarship, who was the head of the Education department of the state of Hawaii. In the book, he is greatly respected until he decides, late in his career, to takeastand on principle against the governor of Hawaii. This leads directly to Poor Dad losing his job, and his inability to find comparable work ever again. Because he has never learned to handle money, instead depending on the government (an employer) for support, he dies in severe debt.
Posted by Philip Shield at 10:43 AM 1 comment:
Posted by Philip Shield at 10:40 PM No comments:
Posted by Philip Shield at 12:08 AM No comments:
အစိုးရဌာနများတွင် ပြောင်းလဲအသုံးပြုမည့် မြန်မာစာလုံးပုံစံ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနများတွင် မြန်မာကွန်ပျူတာကျောင်းသားတစ်ဦး တီ ထွင်ဖော်ထုတ်ထားသော မိုင်မြန်မာ မြန်မာစာစနစ် ( My Myanmar Uni-code) စာ လုံးပုံစံကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါမြန်မာစာလုံးပုံစံကိုဖော်ထုတ်သူ မြန်မာကွန်ပျူတာကျောင်းသား မောင်ထူးမြင့်နောင်ကိုဂုဏ်ပြု၍ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော စာလုံးပုံစံများအစား ပြောင်းလဲအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခုတီထွင်ထားသည့် မိုင်မြန်မာစနစ်သည် မြန်မာအက္ခရာစာလုံးများ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ နေရာအပြောင်းအရွှေ့များ၊ စာလုံးအတွဲများ၊ ပါဌ်ဆင့်များ typhography အားလုံးကို မှန်ကန်စွာဆောင်ရွက် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာစာရေးထုံးကျမ်းကို အပြည့်အ၀လိုက်နာထားသဖြင့် သတ်ပုံသတ်ညွှန်း မှားယွင်းစွာရိုက်၍မရအောင်လည်း တားဆီးပေးထားကာ မိုင်မြန်မာ မြန်မာစာစနစ်သည် မြန်မာစာကိုအသုံးပြုသူများအတွက် မြန်မာစာကို တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး ကွန်ပျူတာစနစ်အမျိုးမျိုးတွင် အသုံး ပြုနိုင်ကြောင်းသိရသည်။ မောင်ထူးမြင့်နောင်သည် မိုင်မြန်မာ မြန်မာစာစနစ်ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်က စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။
Posted by Philip Shield at 11:28 PM No comments:
ရပ်နေတုန်း၊ ထိုင်နေတုန်း၊ သွားနေတုန်း၊ အိပ်နေတုန်း အချိန်တွေမှာ “မြင်တယ်၊ ကြားတယ်၊ ရပ်တယ်၊ ထိတယ်၊ နံတယ်” ဆိုတာ လောက်မှာပဲ သတိထား နေရင် လောဘ ဒေါသတွေ ဝင်မလာ နိုင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီလို နှလုံး သွင်းနေတာကို “သမ္ပဇည ပဗ္ဗ” တရား အားထုတ်နည်း လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုတော့ သတိ သမ္ပဇဉ်နဲ့ နေနည်းပေါ့။ အဲဒီလိုသာ လူတိုင်း နေနိုင်ကြရင် သူများ အသက်ကို သတ်ခြင်း၊ ခိုးယူ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ နိုင့်ထက် စီးနင်း လုပ်ချင် ကြတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကမ္ဘာလုံး ကသာ ကျင့်သုံးနို်င် ရင်တော့ တကမ္ဘာလုံး ငြိမ်းချမ်း ကြမှာမို့လို့ ကမ္ဘာအေး တရားဟု မှတ်ကြပါလော့။ (တောင်ပုလု ဆရာတော်ဘုရားကြီး)
Posted by Philip Shield at 2:28 PM No comments:
ရွေဘိုမြို့နယ်၊ ဆိပ်ခွန်ရွာ၊ အင်ကြင်းတောကျောင်းတိုက်ကြီး၏ အဝင်ဝ၌ အလွန်ကြီးမားသော ကုက္ကိုပင်ကြီး လေပြင်းဒဏ်ကြောင့် လဲပြိုသောအခါယင်း ကုက္ကိုပင်ကြီး၏ ပင်စည်မှာ အတွင်း၌ အသားမရှိအခေါင်း ဖြစ်လျှက် ရှိ၏။ စည်ကြီးပြုလုပ်ရန် အဆင်သင့်လျှက်ရှိ၏။ ပင်စည်ကြီးကို ဖြတ်ထွင်းလျှက် သားရေတို့ဖြင့်ကြက်ကာ ကြီးမားသော စည်ကြီးပြုလုပ်ထာရှိပြီး အရှင်သောဘန တရားဟောကာနီး၌ စည်ကြီးကိုတီးစေ၍ ပရိသတ်စုဝေး စေသည်။ ထိုစည်ကိုအကြောင်းပြု၍ ထိုစည်ကြီးရှိသော ကျောင်းတိုက်ကို မဟာစည်ကျောင်းတိုက်၊ ထိုကျောင်းတိုက် ၌ သီတင်းသုံး၍ တရားဟောသောဆရာတော်ကို မဟာစည်ဆရာတော်ဟု ဘွဲ့တော်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ထိုစည်ကြီး ကားဆိပ်ခွန်ရွာ မဟာစည်ကျောင်းတိုက်၌ ယနေ့တိုင်တည်ရှိပါသည်။
Posted by Philip Shield at 2:16 PM No comments:
အရိုးသားဆုံးနှလုံးသားလေးနဲ့ မင်းကိုငါ စွဲလမ်းတမ်းတရင်းနဲ့ ချစ်မိခဲ့ပြီကွာ ကြင်နာသူ မင်းဆီမှာ ရှိနေလဲ နှုတ်လို့မရတဲ့ငါ့အချစ်မင်းအတွက် ဖြစ်နေတာ နောက်ဆုတ်ဖို့ခက်နေတာ သိရဲ့လား မုန်းလို့မရတဲ့ ငါ့အချစ်နဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်နေတာ နေ့ညအိပ်လို့မရ မင်းနဲ့ဝေးတဲ့ ငါ့ရဲ့ည အဆုံးသတ်အရှုံးများနဲ့ မင်းရက်စက်မှာ ကြိုသိထား.. ငါ့ရဲ့အချစ်တို့ မင်းလေးအပြစ်မယူနဲ့ ဒူးထောက်အရှုံးပေး မင်းကိုချစ်နေမယ်... ရင်ထဲကအချစ်တွေလည်း မင်းအတွက်ပဲ...
Posted by Philip Shield at 11:51 PM No comments:
ဖုထစ်ရွတ်တွ၊ ငှက်ဠင်းတသို့ပျဉ်းမငုတ်တို၊ သက်ကြားအိုသည်ကုန်းမို့ထက်တွင် တပင်တည်း။
ခွဆုံအကွေး၊ သစ်ခေါင်းဆွေးလည်းအဖေးတက်လှာ၊ အိုင်းအမာသို့ကျယ်စွာဟက်ပက် ခြအိမ်ပျက်။
ကုန်းမို့ကမ်းပါး၊ မြေပတ်ကြားတွင်စစ်သားခမောက်၊ ပိန်ခြောက်ခြောက်လည်းစစ်ရောက်စခန်း လက်ပြညွန်း။
ထိုပင်ငုတ်တို၊ ပျဉ်းမအိုသည်စစ်ကိုလည်းကြုံ၊ ခြအုံလည်းဖြစ်ခါးထစ်လည်းခံ၊ နေလျှံလည်းတိုက်၊
လေပြင်းခိုက်လျက်၊ မငိုက်ဦးခေါင်းနေသစ်လောင်းသော်ရွက်ဟောင်းညှာကြွေရွက်သစ်ဝေ၍လေပြည်ထဲတွင်၊ ငယ်ရုပ်ဆင်သည်အသင်ယောကျာင်္းကောင်းတကား။
Posted by Philip Shield at 11:16 PM No comments:
ဟိုတုံးက ညနေခင်းများ ကြည်ပြာကန်ဘေးမှာ သံစဉ်လှိုင်းခတ် တေးဖွဲ့လွင့်ပျံ့နေတတ်စဉ် ကမ်းမဲ့ပန်းဗေဒါများ ရေပြင်ပေါ်မှာ မှီရာတည်ရာ စွန့်ခဲ့မျောလို့နေတော့တယ် ကြွေသွားတဲ့ နုပျိုခြင်းများ လှောင်ရယ်သံကြားမှာ မတည်ငြိမ်သေးခဲ့ ငြီးငွေ့စိတ်ပျက်နေရစဉ် အပြစ်မဲ့ အလွမ်းခြေရာများ နာကျင်နေသူ ရင်မှာထင်ကျန် တယုတယ ထွေးပိုက်နေခဲ့သူ ဝေးခဲ့ပြီ ပန်းခရမ်းပြာရေ တစ်ခါတရံမှာ အိပ်မက်လို ပင်ညိုညိုရိပ်တွေ မြမြက်စိမ်းစိမ်းတွေ ဘယ်ဆီမှာလဲ မသိတော့ပါ...
Posted by Philip Shield at 11:42 PM No comments:
"Buddha image appeared in Anuradhapura - India on 21 June 05"
Ref:အရင်နှစ်လောက်က ငါ့သူငယ်ချင်းတွေ Forward လုပ်ကြတဲ့ e-Mail တစ်ခုထဲက
Posted by Philip Shield at 12:02 AM 1 comment:
ပုဂံခောတ် တုံးက ဘုရားတည်ချင်ရင် ဘယ်သူမဆို (မင်းဆွေမင်းမျိုး တွေရော) ပိုင်ရှင်ဆီကနေ တန်ရာတန်ကြေးပေးပြီး မြေ၀ယ်ရတယ်။ အိမ်ပွဲစားတွေ(အသည်) တွေ ကို အကျိုးဆောင်ခပေးရတယ်။ ကျွေးမွေးရတယ်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ နဲ့ လူသက်သေတွေနဲ့။ ဘုရားတည်ရင်လည်း ကျွန်တွေနဲ့ ဆောက်တာမဟုတ်ပါ။ အလုပ်လုပ်စဉ် လုပ်သားဖို့ နေရာပေးရတယ်။ လက်ခတွေ တန်ရာတန်ကြေး ပေးရတယ်။ Bonus အဖြစ် ဆင်မြင်း ပုဆိုး ဖျင် တွေပေးကြရတယ်။ အလုပ်သမားတွေ ထမင်းချက်စားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် စပါး ဆန်ဖွပ်ပေးရတယ်။ ပညာရှင်တွေ၊ အလုပ်သမားတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ထားတယ်၊ ကျွေးမွေးတယ်၊ ဒီ ကျောက်စာ မှာ နဲနဲဖတ်ကြည့်ပါ။ကျောက်စာ (၂၆၄) အတိုင်း ပြောမယ် (၉၃)။ ပုဂံခေတ်ကုန်ခါနီးလောက်မှာ ဒဗယင်နားက သာ၆၀် (သောလူမျိုး၊ ကဒူးလူမျိုး) တွေက မြေပယ် ၁၀၀၀ ရောင်းတယ်၊ တရုတ်ပ္လေမင်ရဲ့ အဖွာ၊ ဖွာဇင်္ဂဝ မင်းဝိုင်း မင်းနန်သူကျောင်းမှာာ မြေလိုချင်လို့ ဝယ်တယ်။ အဖွားစောရဲ့ အလှုတော်ငွေကို စတုရင်္ဂဗိုလ် ဥက္ကဌ လုပ်တဲ့ ဘဏ္ဍာတော်ထိန်းအဖွဲ့နဲ့ ထားခဲ့ပြီး အဖွားက နတ်ရွာစံသွားပြီလို့ ခန်းမှန်းရတယ်။ ပယ်တထောင်ကို က္လျပ်တထောင်နဲ့ ဈေးဖြတ်ပြီးသား၊ အသည် ဘုမ္မခေတြ ခေါင်းဆောင်တဲ့ သာ၆ဝ် သံဗျင် ကလန်နဲ့ အသည်ကိုးယောက်က သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့မှာ ငွေလက်ခံတယ်။ သာ၆ဝ် တွေရဲ့ ကျားသူကြီးမြေး ငဝံခင်သင်က စတုရင်္ဂဗိုလ်ကို မြေအပ်ရမယ်။ သာ၆ဝ်တွေကို အဲဒီအခါမှာ လက်ဆောင်အဖြစ် အဝတ်အထည်ပေးဖို့ ငွေတော်နဲ့ ဝယ်ရတယ်။ လူ့အဆင့်အတန်းလိုက်ပြီး ဘုမ္မခေတြလို ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ ၃၅ က္လျပ်တန်က တချို့ကို ၁ က္လျပ်တန်အထိ ပေးရတယ်။ လူ ၄ ဦး ထပ်တိုးတယ်။ ငဝံခင်သင်ရဲ့ အဖော် (ချင်) တွေလည်း ပေးရတယ်။ ထမင်းစားသောက်ပွဲအတွက် ဆန်ဖိုး ၅၄ က္လျပ်၊ သိယ်ဖိုး ၂.၂၅၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်တိုင်း သိယ်ဖိုဝ် သာဖိုဝ် ကုန်စမြဲပါ (၉၄)။ ဒီလို အလီလီစရိတ်ကို ပေါင်းလိုက်ရင် ၁၃၇ ၁/၄ က္လျပ်ဟာ ဝယ်ဈေး ၁၀၀၀ အပြင် ကုန်ရတာ ဖြစ်တယ်။ ငွေချိန်တဲ့အခါ သစ်သီးချိန်ခွင်ထက် တစိတ်အလေးပိုတယ် အကြိမ်တဆယ် ချိန်ရတယ်။ ပုဂံမင်းနန်သူ ကျောင်းတော်ရှေ့မှာ ငွေချေတော့ သိမြင်သူ ခြောက်ယောက်ထဲမှာာ မှုးကြီး၊ မတ်ကြီးနဲ့ ငွေတိုက်စိုး မင်ချင်ဘဏ္ဍာလည်း ပါတယ် (၉၅)။
ရှေးမြန်မာတို့ ၀မ်းစာရှာပုံ (ဒေါက်တာသန်းထွန်း)
The Palm Islands in Dubai are the three largest artificial islands in the world, being constructed by Al Nakheel Properties in the United Arab Emirates. Each settlement will be in the shape ofapalm tree, topped withacrescent, and will have residential communities and resorts built upon them. Detail:http://www.thepalm.ae/
Posted by Philip Shield at 3:38 PM No comments:
1) မျှစ်ကြော်၊ ပဲပုပ်စေ့ချက်၊ ငါပိထောင်း၊ လက်ဖက်သုတ်။
2)ငါးပိရည်၊ တို့စရာအစုံ(ရှောက်ရွက်၊ သခွားသီး၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ပဲစောင်းလျားသီး၊ ဥသျှစ်ရွက်)
4)ကျိုက်ထီးရိုး ကင်ပွန်းစခန်း မှ ကတွတ်ယို
5)ရေနီမှ ငါးရံ့ခြောက်၊ ပဲခူးမှ ငါးဖယ်ချဉ်
Posted by Philip Shield at 3:30 PM 1 comment:
အေဗရာဟင်လင်ကွန်းဟာ အခြားသူတွေကို သူ့ဘက်ပါအောင် ဆွဲဆောင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ပြသနာတွေ၊ ကွဲလွဲမှုတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ ဖြစဖြစ် သူစိတ်ကြိုက် ပုံဝတ္တုတပုဒ်ကို ပြောပြီး ဆွဲဆောင် ဖြေရှင်းတတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လင်ကွန်းက သူမိတ်ဆွေတဦးကို "ကျုပ် ပုံဝတ္တုတွေသိပ်ပြီးပြောတယ်လို့ လူတွေက ပြောကြတယ်၊ အဲဒါ မှန်ပါတယ်၊ သာမန်လူတွေကို အခြားနည်းလမ်းထက် ပုံပြောတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ပိပြီး လွယ်လွယ်ကူကူ ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကျုပ်အတွေ့အကြံအရ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။"
စစ်အတွင်းက ပြည်ထောင်စု မျိုးချစ်များဟု ထင်ရသူများသည် လက်တွေ့တွင် မဟာမိတ်ပြည်ထောင်စုဘက်သို့ လျို့ဝှက် သတင်းပေးနေသော စပိုင်များ ဖြစ်ကြောင်း သိသွားသည်။ ထိုစဉ်တွင် လင်ကွန်းမှာ လုံခြုံရေး ကိစ္စအတွက်လည်း ပူရ၏။ ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စု ဘက်တော်သားများဟူ၍ ယုံကြည်ထားသူများက သစ္စာဖောက်များ ဖြစ်နေခြင်းအတွက်လည်း ပူရ၏။ ဤကိစ္စကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး စတင်တန်က သက်သေအထောက်အထားနှင့်တကွတင်ပြသည်။ ထိုနောက် သမ္မတကြီးဘက်သို့ လှည်ပြီး လမ်းညွန်ချက် တောင်းခံလိုက်သည်။ ဤတွင် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကာ တချိန်လုံး ငြိမ်ဆိတ်နေခဲ့သော သမ္မတကြီးက သူ၏ ခံစားချက်ကို ပုံပြင်တခုဖြင့် ပြောပြသည်။ ပုံပြင်မှာ သူ၏ အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်သို့ စီးမိုးနေသော အရိပ်ရသစ်ပင်ကြီး တပင် အတွက် ပြသနာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် လယ်သမားကြီးအကြောင်း ဖြစ်သည်။
"သစ်ပင်ကြီးက အလွန်ကျက်သရေရှိတယ်၊ ဖြောင်တန်းမြင့်မားတဲ့ ဧရာမ သစ်ပင်ကြီး၊ တောထဲက လယ်သမားအိမ်အတွက်တော့ တကယ့်ကို ပနာရပြီး ခံ့ညားလှတဲ့ အိမ်စောင့်သစ်ပင်ကြီးပေါ့။ အခက်အရွက်တွေ ဝေဝေဆာဆာနဲ့ အလွန်လှတဲ့ ဒီသစ်ပင်ကြီးအတွက် လယ်သမားကြီးကလည်း အလွန်ဂုဏ်ယူတယ်။ တနေ့တော့ ဥယျာဉ်ထဲမှာ လယ်သမားကြီး အလုပ်လုပ်နေတုန်း ရှဉ့်ကလေးတကောင် သစ်ပင်ပေါ် ပြေးတက်သွားတာ မြင်လိုက်ရတယ်။ ဒီအခါ လယ်သမားကြီးက ဒီသစ်ပင်မှာ အခေါင်းရှိမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။ ဒါနဲ့ သူက သစ်ပင်ကို စေ့စေ့စပ်စပ် စစ်ဆေးကြည့်တယ်။ လား ... လား ... သစ်ပင်ကြီးဟာ ခြေရင်းကနေပြီး ထိပ်ဖျားအထိ အူကြောင်းပေါက် ဟောင်းလောင်းကြီးဖြစ်နေတာ တွေ့ရတော့ လယ်သမားကြီးဟာ အလွန်အံသြသွားမိတယ်။ အပေါ်ယံ အခွံမာရှိနေသေးလို့သာ သူ့အလေးကို သူ ထိန်းထားနိုင်သေးတာ။ ဒီတော့ လယ်သမားကြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ ခုတ်လှဲလိုက်ရင်လည်း အပင်က ကြီးလွန်းလို့ အပျက်အစီး အများကြီး ရှိနိုင်တယ်။ မလှဲဘဲ ထားလိုက်ပြန်ရင်လည်း မိသားစုအန္တရာယ်အတွက် အမြဲတမ်း စိတ်ပူနေရလိမ့်မယ်။ လေပြင်း မုန်တိုင်းတိုက်ရင် ဒီသစ်ပင်ကြီး ဘုံးဘုံးလဲပြီး အိမ်ရော၊ လူတွေရော အားလုံး မြေကြီးပေါ်မှာ ပြားပြားကပ်သွားမှာ ကျိန်သေပဲ။ အဲဒီတော့ လယ်သမားကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ သူလုပ်တာကတော့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ နောက်ကို ပြန်လှည့်ပြီး 'အဲဒီ ရှဉ့်ကလေးကို ငါမမြင်မိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ' လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ "
Posted by Philip Shield at 11:08 AM No comments:
အကြိမ်ကြိမ်ရင်ခုန်မိသော မင်းမျက်ဝန်း... အာရုံမှာငြိတဲ့မျက်ဝန်း... မင်းရဲ့အကြည့်မှာ မျောနေခဲ... မင်းရဲ့ မင်းရဲ့ အချစ်မျက်ဝန်း...ကျိန်စာအလား... ရပ်မသွားတဲ့... ခံစားချက်ပေါင်းများစွာနဲ့... စူးရှတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံ... မင်းချန်ခဲ့... မူမပိုင်တဲ့ မျက်ဝန်းအတွက် ကျိတ်ပြီးရူးခဲ့ရပေမဲ့... နှုတ်ဆက်မယ် ဒီနှုတ်ခမ်းတွေ တွေးပူနေ...
Posted by Philip Shield at 11:12 PM No comments:
1)Bill and Melinda Gates, the world's richest couple,
have donated $3.34bn for new health and education projects worldwide.
2)Bill and Melinda Gates Foundation မှ HIV/AIDS ရောဂါကာကွယ်ဆေး တီထွင်စမ်းသပ် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အတွက် ဒေါ်လာ ၂၈၇ သန်းလှူဒါန်း ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်ရေး နည်းလမ်းအတွက် ချဉ်းကပ်မှု နည်းလမ်းသစ်များကို အတူတကွ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ သိပ္ပံအဖွဲ့အစည်းများသို့ အချိုးကျလှူဒါန်း ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါလှူဒါန်းငွေများကို လက်ခံရရှိသော အဖွဲ့အစည်းများသည် အပြိုင်စီမံချက်များ လုပ်ကိုင်နေသူများဖြစ်သည့်တိုင် ၄င်းတို့၏ ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိချက်များကို မျှဝေကြရမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်...
အာရုံ ခြောက်ပါးပဲ ရှိတယ်။ စိတ်ဖြစ်အောင် ဘယ်သူမှ မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဘယ် သဗ္ဗညုတ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မှလည်း မဖန်ဆင်းနိုင်ဘူး၊ သူ့သဘောအတိုင်းသူ ဖြစ်နေတာ၊ အာရုံရှိရင်စိတ်ဖြစ်မယ်၊ ဒါဗုဒ္ဗမြတ်စွာ ဖန်ဆင်မပေးနိုင်ဘူး။ ဒိပြင်ဒိပြင် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဆိုတာကတော့ မပြောနဲ့တော့၊ ဖန်ဆင်းမပေးနိုင်ဘူး၊ အဲဒီ အာရုံရှိလို့ စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ အာရုံ+စိတ်+စေတသိက် ဒါပဲရှိတယ်၊ ဒီထဲ သတ္တ၀ါဆိုတာ မရှိဘူး၊ "သူ" လို့ဆိုတာ ရှာလို့မရဘူး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ရှာမရဘူး။ အာရုံ+စိတ်+စေတသိက် ဒါပဲရှိတယ်.....
ကံက ပြုစီမံလိုက်တဲ့ စက္ခုပသာဒ မျက်စိထဲမှာရှိတဲ့ ပသာဒရုပ်၊ အဲဒီ စက္ခုပသာဒလဲ ရှိမယ်၊ ခုနက ရူပါရုံလဲ ရှေ့မှာရှိမယ်၊ ဒီအာရုံကိုလည်း နဲနဲ သတိထားလိုက်မယ် ဆိုရင် စက္ခုဝိညာဏ်စိတ် ဖြစ်တာပဲ၊ ဘယ်သူမှ လာပြီတော့ ဖန်ဆင်းလို့မရဘူး၊ စက္ခုပသာဒလဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ ရူပါရုံကလဲ ရှိနေတယ်၊ သူ့ကိုလဲ နှလုံးသွင်းတယ်၊ ဘေးက အရောင်အလင်း ရှိတယ်၊ ဒီလိုဆိုရင် စက္ခုဝိညာဏ်စိတ် မဖြစ်ဖို့ရာ ဘယ်သူမှ မတားဆီးနိုင်ဘူး။ ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူး၊ အတ္တမပါဘူး၊ အကောင်အထည် မရှိဘူး၊ ဒီတရားပဲ ရှိတယ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး၊ အတ္တမရှိဘူး၊ အကောင်အထည် မရှိဘူး၊ ဘယ်သူဖန်ဆင်းလို့မှလဲ မရဘူး။ (စက္ခုပသာဒ+ ရူပါရုံ +အရောင်အဆင်း+ နှလုံးသွင်းမှု) မရှိရင် စက္ခုဝိညာဏ်ဖြစ်ဖို့ရာ (ဒိပြင်ဒိပြင် ဘုရားဘုရားကို တော့မပြောလိုဘူး)၊ ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကိုက မဖန်ဆင်းနိုင်ဘူး၊ တရားတော်က အင်မတန်သေချာတာပဲ။ ခုနက အကြောင်းတွေ ဆုံလာလို့ရှိယင် မဖန်ဆင်းနဲ့ ဖြစ်ကို ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူမှ ဖန်ဆင်းလို့မရဘူး။ ဘယ်မလဲ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဘယ်မလဲ အတ္တ၊ ဘယ်မလဲ အကောင်အထည်၊ ဘယ်မလဲ "ငါ"၊ ဘယ်မလဲ "သူ"၊ အင်မတန်ကောင်းလွန်းလို့။
မဟာဂန္ဗာရုံဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ ပဌာန်းတရားတော်
Posted by Philip Shield at 9:33 PM No comments: